covid အတွက်စမ်းသပ်မှု covid ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အိတ်ဆောင်အဆင်ပြေစျေးနှုန်း - intouchmedicare
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းနှင့် COVID-19 ကိုယ်ခံအားရှိ၊မရှိကိုစစ်ဆေးခြင်း
Covid-19 သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်မှုပုံစံကို ကဏ္ဍတိုင်းလိုလိုတွင် ပြောင်းလဲစေသည့် သေစေသောရောဂါဖြစ်သည်။ လူတော်တော်များများက ကျန်းမာရေးကို ပိုအာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိခဲ့ရသည်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေး၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအား၊ လူမှုရေးအရ ခပ်ခွာခွာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ခုခံအားစမ်းသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော်လည်း၊ သင့်အနီးနားရှိလူများကို ကူးစက်နိုင်ခြေ သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကိုယ်ခံစွမ်းအား ခုခံမှုအဆင့်ကို သိခြင်းသည် စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သော အထောက်အကူတစ်ခု ဖြစ်သည်။အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် COVID ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် စမ်းသပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကိုယ်ခံအားရှိမရှိ သိဖို့နဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့ အမြင့်၊အနိမ့်ကို သိနိုင်ပါသည်။
COVID-19 ကိုယ်ခံအားစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာက ဆဲလ်အတွင်းရှိ covid ကိုကူးစက်စေနိုင်သော ဆဲလ်များမှပေါက်ဖွားစေပြီးအရေးကြီးသော Spike Protein ၏အစိတ်အပိုင်းရှိ SARS-CoV2 ၏ကိုယ်ခံအားအဆင့်ကိုရှာဖွေရန်သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ခန္ဓာကိုယ်က ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် COVID ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့အခါ ခုခံအားစနစ် ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ခုခံဖို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတည်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မည်။ကိုယ်ခံစွမ်းအားအဆင့်ရှိခြင်းအားဖြင့် ကူးစက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပါလိမ့်မည်၊ COVID-19 ၏ ပြင်းထန်မှုကိုလဲလျှော့ချစေပါသည်။
SARS-CoV2 ၏ ကိုယ်ခံအားအဆင့်ကို စစ်ဆေးရန် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သလဲ?
1. Covid ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ကိုယ်ခံအားစနစ်၏တုံ့ပြန်မှုကို ကြည့်ရန်၊ အများစုမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး4ပတ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပြီးနောက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ - Sinovac ကာကွယ်ဆေး ၂ ကြိမ် ထိုးပြီးနောက် ၄ ပတ်နောက်ပိုင်းကာလတွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
- AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးထိုးပါက (AstraZeneca) 1 ကြိမ်ပြီးနောက် ၄ပတ်နောက်ပိုင်းကာလတွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
2. ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုသေချာရန် COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးနောက်၊ရောဂါပိုးကူးစက်ပြီး ၄ ပတ်ခန့်အကြာတွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
3. ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင် ရောဂါလက္ခဏာမပြ၍ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသည်ဟု သံသယရှိလျှင် ကိုယ်ခံအားအဆင့်ကို စစ်ဆေးနိုင်သည် (သို့)သဘာဝ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ရှိပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် COVID-19 ခုခံအားစမ်းသပ်မှုပင် COVID-19 ကူးစက်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် COVID ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို သိထားရပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ကန်စွာ ဂရုစိုက်ပါက ကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိလိမ့်မည်။ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်းစသည့် ပြင်းထန်သေဆုံးနိုင်ခြေတို့ကို လျှော့ချစေနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းနှင့် COVID-19 ကိုယ်ခံအားရှိ၊မရှိကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်မည်သို့ကောင်းသနည်း?
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကုသရန်အထူးကုဆရာ၀န်နှင့် အတွေ့အကြုံရှိသောဆရာ၀န်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော ခေတ်မီစက်ကိရိယာများ ရှိသောကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းရလဒ်များကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးမထိုးမီနှင့် ထိုးပြီးနောက်တွင် သင့်အား Covid ၏ ခုခံအားကိုယ်ခံစွမ်းအားကို သိရှိရန် ကူညီပေးသည်။
အဆင်ပြေ၊ မြန်ဆန်၊ သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် Package ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
သင့်အိမ်အနီးအနားရှိ ဆေးခန်းများမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သော ဌာနခွဲများစွာရှိပါသည်။
COVID ခုခံအားကို စမ်းသပ်လိုသူများအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိ လိပ်စာမှတဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုပါကမေးမြန်းနိုင်ပါသည် ။သင်သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မထိုးသည်ဖြစ်စေ Intouch Medicare Clinic ဖြင့် COVID-19 ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားရှိ၊မရှိ အတွက် စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် မိမိချစ်သူများအတွက်ကို အသင့်လျော်ဆုံး ပြုစုစောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။